Musharax C/raxmaan C/shakuur oo sheegay in musuq-maasuq baahsan ay ka jirto doorashada (VIDEO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Musharax C/raxmaan C/shakuur oo sheegay in musuq-maasuq baahsan ay ka jirto doorashada (VIDEO)
C/raxmaan C/shakuur Warsame oo ka mid ah musharixiinta sanadkaan u tartameeysa doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay soo gaareen warar sheegayo in lacago lagu kala iibsaday xubnaha Aqalka Sare ee maamulka Galmudug oo maanta lagu soo gaba-gabeeyay magaalada Cadaado.
Waxa uu musharax C/raxmaan sheegay in ergooyinka soo xulayo Aqalka baarlamaanka la kala xod-xodanayo si ay ugu codeeyaan musharixiinta ku tartami doona Aqalka hoose ee baarlamaanka.
“Waxaa la sheegay in kuraasta Aqalka Sare lagu kala iibsaday lacag badan, waxaa kaloo maqalnay in ergooyinka dooran lahaa Aqalka Hoose ee baarlamaanka lacag lagu iibsanayo, iyadoo codka mid kasta oo ka mid ah ergadda lagu iibsanayo ilaa 5,000 dollar” Sidaas waxaa yiri musharax madaxweyne C/raxmaan C/shakuur Warsame.
Dhinaca kale, waxa uu musharax C/raxmaan C/shakuur si kulul u naqdiyay dhaqan-xumida ka muuqato doorashadda dalka, isagoo ku tilmaamay in doorashaddu ay musuq-maasuq baahsan hareyn doonaan.
Wuxuu musharax C/raxmaan ugu baaqay siyaasiyiinta, dhalinyaradda, odayaasha dhaqanka, maamul gobaleedyada dalka iyo sidoo kale beesha caalamka inay ka hor-tagaan musuq-maasquqa lagu kala iibsanayo kuraasta Aqalka Sare iyo Aqalka Hoose ee baarlamaanka soo socda.
“Marka hore siyaasadda waa danta dadka iyo dalka, waxaana siyaasadda loo baahan yahay naf-hurnimo, waqti-hurida iyo siyaasad caafimaad qabta” Ayuu hadalkiisa raaciyay musharax C/raxmaan C/shakuur Warsame.
Waxa uu musharixiinta ku booriyay inaysan siyaasadda ka dhigin ganacsi iyo lacag wax looga iibsanayo suuqa.
Ugu dambeyntii, musharax C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa sheegay in loo baahan yahay in lala yimaado siyaasada halgamayaasha ururkii SYL ee horseeday midnimadda qarankeena Soomaaliya.